Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Xafiiska Shirarka Ruushka ayaa ku dhawaaqay Maareeyaha cusub
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Sagid Zaremukov ayaa wajahaya hawlaha sii horumarinta hawlaha ururka iyo iskaashiga warshadaha gudahiisa, kor u qaadista suurta galnimada dhacdada dalka iyo gobollada, qaabaynta ajandaha caalamiga ah ee RCB, iyo sidoo kale hirgelinta mashruuc lagu abuurayo shabakad goboleed xafiisyada shirweynaha.
Musharraxnimada Sagid Zaremukov wuxuu helay taageero 100% ah.
Madaxa cusub ee RCB wuxuu leeyahay waayo -aragnimo ka badan 15 sano shirkadaha waaweyn ee warshadaha dhacdada.
Waa khabiir shahaado haysta oo ka mid ah abaalmarinta tayada ee Dawladda Ruushka.
Doorashada agaasimaha cusub ee Ururka ayaa ku dhacday qaab -dhismeedka Kulanka Guud ee Xafiiska Shirarka Ruushka (RCB) shirkadaha xubnaha ka ah, oo ka dhacay July 9, 2021 goobta Cosmonautics and Aviation Center (VDNKh, pavilion 34). Marka la eego natiijada codbixinta, murashaxnimada Sagid Zaremukov waxay heshay taageero 100% ah.
Madaxa cusub ee RCB wuxuu leeyahay waayo -aragnimo ka badan 15 sano shirkadaha waaweyn ee warshadaha dhacdada. Kahor intuusan ku biirin Xafiiska Shirarka Ruushka, wuxuu jagooyin fulineed ka qabtay RESTEC Group of Companies, oo ka mid ah ururada hormuudka ka ah shirweynaha Ruushka iyo suuqa bandhigga. Sannadkii 2018, Sagid Zaremukov wuxuu ku biiray kooxda Xafiiska Shirarka Ruushka wuxuuna la falgalay mas'uuliyiinta fulinta federaalka iyo gobolka, iyo sidoo kale ururada ganacsiga iyo shirkadaha warshadaha dhacdooyinka dalka, wuxuu matalay danaha xubnaha RCB ee hay'adaha dawladda iyo ururada guud ee ganacsiga horumarinta warshadaha. Laga soo bilaabo Maarso 2021, wuxuu ahaa ku simaha agaasimaha RCB. Waa khabiir shahaado haysta oo ka mid ah abaalmarinta tayada ee Dawladda Ruushka.
Faalladiisa, Sagid Zaremukov wuxuu xusay in qorshaha wax ku oolka ah ee isdhexgalka ciyaartooyda warshadaha muhiimka ah la abuuray sanadihii waxqabadka Ururka, iskaashiga istiraatiijiyadeed ee xafiisyada gobolka, warshadaha hogaaminaya iyo ururada dadweynaha ay sii socon doonaan. "Waxaan sidoo kale raadin doonnaa qaabab cusub oo shaqo wada jir ah oo looga golleeyahay horumarinta suuqa dhacdooyinka Ruushka iyo xoojinta warshadaha," ayuu yiri Sagid Zaremukov.
Marka la eego qaab -dhismeedka Kulanka Guud ee RCB, dhowr arrimood oo abaabul oo la xiriira waxqabadyada Ururka ayaa sidoo kale la tixgeliyey waxaana lagu dhawaaqay natiijooyinka mashruuca onleenka waxbarashada ee RCB “Akademiyada Xagaaga”. Mashruucan waxaa si wadajir ah u fuliyay Bandhigga R&C iyo Xarunta Cilmi -baarista iyo taageerada Roscongress Foundation. Ujeeddadiisu waxay ahayd in ka -qaybgalayaasha shirweynaha iyo suuqa bandhigga fursad la siiyo horumarinta xirfadda shaqsiyeed ama helitaanka karti cusub. Sannadkan, 18 khubaro hormuud u ah shirweynaha iyo warshadaha bandhigga iyo warshadaha la xiriira ayaa macallimiin ka noqday Akadeemiyadda Xagaaga ee RCB waxayna la wadaageen khibraddooda dhagaystayaasha. In ka badan 200 oo wakiil oo ka tirsan shirweynaha iyo suuqa bandhigga ayaa noqday dhegeystayaasha mashruuca “RCB Summer Academy”. Goobta VDNKh, shahaadooyin ayaa lagu guddoonsiiyay ardaydii qalin jabisay waxayna u mahadceliyeen macallimiinta Akadeemiyadda Xagaaga ee RCB.
JSC VDNKh, NEGUS-Expo iyo shirkadda cuntada ee Prazdnik Vkusa waxay noqdeen shuraakada Kulanka Guud ee Xafiiska Shirarka Ruushka. Booqashada Xarunta Cosmonautics iyo Aviation Center ayaa loo qabtay ka qaybgalayaasha Kulanka Guud, iyo sidoo kale intii lagu jiray kormeerka goobta, shirweynaha iyo awooda bandhigyada ee goobaha VDNKh ayaa la soo bandhigay.